PHOENIX@ | Myanmar Mp3 Album
MMHLS6MOnth Anniversity Mixtape
http://myanmarhiphoplovesongs.com ရဲ့ ၆လပြည့် Mixtape အနေနဲ့ ပထမ ဆုံး Mixtape ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်………. သီချင်းတွေကို ကျေနပ်နိုင်လောက်တယ့် အနေအထားထိ ကျွန်တော့် တို့ MMHLS အဖွဲ့သားတွေ ရွေးပြီးတင်ထားတာ ဖြစ်တယ့် အတွက် အားလုံး ကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သီချင်းတွေ ထဲ က လူကြိုက်အများဆုံးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ MMHLS အဖွဲ့သားတွေအကြိုက်ဆုံး တစ်ပုဒ် ကို ဆိုတယ့် အဆိုရှင်ကို Official Website လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ့် အတွက် နားထောင်ပြီးသွားရင်လည်း Comment များပေးခဲ့ စေလိုပါတယ်။ 1.Everytime … Continue Reading →
June 15, 2011 [email protected] အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (အများ) Unreleased Albums3Comments
မင်းအတွက် (3) ( Hip Hop)
၁..တစ်သက်လုံးချစ်မယ့် သူ-ဆှူဇီ ၂.ဂန္တဝင်အချစ်-ဂျေမီ+ဂျူး ၃.ကြွေလွင့် တော့ မယ်-အိမ့် ချစ် ၄.သူမနဲ့ အိပ်မက်- Snare+ သဇင် ၅.မိုးတိမ်ကဗျာ-ရသ+ နီနီခင်ဇော် ၆.ခွင့် လွှတ်နိုင်မလား- ဂျောက်ဂျက်+K.H.$+မိုးယမုံ ၇.သူစိမ်းဖြစ်ပြီလား -နန္ဒာ ၈.သည်းခံပြီးတော့ မင်းစောင့် မယ်ဆိုရင် -လန်ဘား+နက်ကျော် ၉.လှည့် စားတတ်သူ-သင်းရနံ့ +အကြင်နီာDownload Whole Album With Hulkshare Download Whole Album With Mediafire
March 8, 2011 [email protected] အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) ဂျောက်ဂျက် ကျော်ထွဋ်ဆွေ Myanmar Artist Leaveacomment
Only FOr You ( MC Wai Lin)
Song Name : Only For You Artist and Composer: MC Wai Lin Music By MC Wai Lin and Lu Soe Studio: PemPo Mixing: MC Wai Lin အဖြေမရသေးတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုရင်ထဲကစကားတွေကိုပြောထားတဲ့သီချင်းလေးပါ..ဒေါင်းရတာတန်မယ့် သီချင်းတစ်ပုဒ်လို့ပြောချင်ပါတယ်….နားဆင်အားပေးကြပါဦး….. Download With Mediafire Download With Hulkshare ဝေဖန်အကြံပေးချင်ရင် [email protected] ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် >
January 27, 2011 [email protected] Unreleased Albums5Comments
[email protected] ( NEW VERSION) MC WAI LIN FEAT-EASTERN-P
အချစ်သီချင်းအမြူးလေးတစ်ပုဒ်ပါ….ဒေါင်းရတာတန်မယ့်သီချင်းလို့ပြောနိုင်ပါတယ်.. နားဆင်ကြည့်ကြပါဦး Song Name : [email protected] ( NEW VERSION) ARTIST: MC WAI LIN Feat- EASTERN-P BEATZ BY MC WAI LIN EDITING AND MASTERING: BRO KHY HTOO STUDIO: PEMPO DOWNLOAD FROM MEDIAFIRE DOWNLOAD FROM HULKSHARE CREDIT BY MHC
January 21, 2011 [email protected] အဆိုတော် (ကျား) Myanmar Artist Myanmar Underground Rhyme Ghosts Unreleased Albums 1 Comment
အွန်လိုင်းချစ်သူ(၁) MC ဇေရဲ
အရင်တုန်းက..အွန်လိုင်းချစ်သူ(2) ကိုကျွန်တော်တင်ပေးဖူးပါတယ်…အဲတုန်းက အွန်လိုင်းချစ်သူ(1)ကိုတောင်းဆိုတဲ့သူတွေရှိပါတယ်..အခုမှတင်ပေးရတဲ့အတွက် Sorry ပါ…. ဒီမှာဒေါင်းပါ
January 12, 2011 [email protected] အဆိုတော် (ကျား) Media Unreleased Albums Leaveacomment
MC Wai Lin Song Collection
MC Wai Linရဲ့သီချင်းတွေစုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီမှာဒေါင်းပါ
January 10, 2011 [email protected] အဆိုတော် (ကျား) Media Myanmar Underground Unreleased Albums7Comments
မမေ့ပါနဲ့ ( MC Wai Lin) With Lyric
Song Name: မမေ့ပါနဲ့ Artist: MC Wai Lin Music By Lu Soe Studio: PumPo and Editing By MC Wai Lin အချစ်သီချင်းလေးပါ…ဒီထပ်ပိုပြည့်စုံအောင်ပြောရရင်”မ” သီချင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့…စာသားတွေတော်တော်များများ ကရင်ထဲကိုထိမယ့်..စာသားလေးတွေမို့..နားထောင်သင့်တယ်လို့…အကြံပေးလိုက်ပါရစေ………… ဒေါင်းရတာတန်မှာပါ..သီချင်းစာသားကိုပါ..ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်….ီDownload Song With Mediafire
January 10, 2011 [email protected] အဆိုတော် (ကျား) Media Myanmar Artist Unreleased Albums 1 Comment
အမုန်း(New Version) (MC Wai Lin)
အမုန်းရဲ့(New Version)အသစ်ပါ….နားထောင်ကြည့်ပါဦး… သီချင်းကောင်းလေးပါ
October 3, 2010 [email protected] အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) Media Myanmar Artist Leaveacomment
Never Meet(MC Wai Lin Feat -Su Myat)
Never Meet MC Wai Lin Feat- Su Myat Lyric-MC Wai Lin Studio-Pizza Studio Edited By -Hein Thura San သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်မှာပါ…နားထောင်တဲ့သူတွေအားလုံးအကြိုက်တွေ့နိုင်ပါတယ် နားဆင်ကြည့်ကြပါဦး အောက်ကလင့်တွေမှားဒေါင်းနိုင်ပါတယ် mediafire mirrcreator ifile Credit By:www.myanmarhiphopchannel.com
August 28, 2010 [email protected] အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (အများ) Media Myanmar Artist5Comments